विश्व योग दिवस : योग केवल आसन होइन - Naya Aawaj
breaking Hot कोरोना संक्रमण निषेधाज्ञा कोरोना तारकेश्वर नगरपालिका नेपाल स्काउट प्रधानमन्त्री ओली
विश्व योग दिवस : योग केवल आसन होइन
७ असार । हाम्रो शरीरको व्यापकतालाई बुझ्न अनि अनुभूत गर्नका लागि यसभित्र रहेको शक्तिको केन्द्रलाई जान्नुपर्छ । ऋषिमुनीहरुले यस शक्तिको केन्द्रलाई ‘चक्र’ भनेका छन् ।
आयुर्वेद अनुसार शरीरमा आठ चक्र हुन्छ । यद्यपि यसलाई हामीले आफ्ना इन्द्रियबाट महसुश गर्न सक्दैनौं । आयुर्वेदमा योग, प्राणायाम र साधानाको मद्दतले यी चक्र जागृत गराउने बताइएको छ ।
आज दिन-दिनै अस्पताल बनिरहेका छन् । अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणको विकास भइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरु उत्पादन भइरहेका छन् । नयाँ नयाँ औषधिको खोज र विकास भइरहेका छन् । किनभने प्रतिदिन अस्पतालको चक्कर लगाउने बढ्दैछ । औषधिको खपत बढ्दैछ ।
रोग लागेपछि त्यसको निदान र उपचार जरुरी छ । त्यसैले रोग लागिसकेको अवस्थामा अस्पताल धाउनु, औषधि खानु नै छ । यद्यपि रोगमुक्त जीवन विताउनका लागि के गर्ने ?
यसका लागि हाम्रा पूर्खाहरुले विभिन्न खोज अध्ययन र अभ्यास गरेका छन् । निरोगी एवं रोगमुक्त भएर खुसी र आनन्दित जीवन विताउने उपायहरु पत्ता लगाएका छन् र आफ्ना सन्ततीलाई त्यसैको अनुसरण गर्न प्रेरित गर्दै आएका छन् । योग, ध्यान, प्राणायाम यसकै दृष्टान्त हुन् ।
योग भनेको सही तरिकाले जिउने विज्ञान हो । अतः यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा सामेल गर्नुपर्नेछ । यसले हाम्रो जीवनसँग जोडिएको भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक र आध्यात्मिक सबै क्षेत्रमा काम गर्छ ।
यसैगरी योगको अर्थ हो, जोडिनु । मन र शरीर जोडिनु । मन र प्रकृति जोडिनु । आध्यात्मिक हिसाबले योगको अर्थ सार्वभौमिक चेतना र व्यक्तिगत चेतना आपसमा जोडिनु हो । योगले शारीरिक लाभ मिल्छ । त्यसपछि मानसिक र भावनात्मक स्तरमा यसबाट लाभ मिल्छ ।
त्यसैगरी अज्ञानताबाट ज्ञानतर्फ, जडबाट चेतनातर्फ, निर्बलताबाट सबलतातर्फ, जीवनबाट ब्रम्हातर्फ, सीमितताबाट असिमिततातर्फको आध्यात्मिक यात्रालाई योग भनिएका छन् ।
योग भनेको शरीरलाई तन्काउनु, मर्काउनु, उफ्रिनु होइन । अर्थात शारीरिक व्यायाम मात्र पनि योग होइन । योगमा आसन, प्राणायाम र ध्यान जस्ता विधिहरु हुन्छन् । यी विधीहरुबाट हामीले मन, श्वास र शरीरको विभिन्न अंगबीच समान्जस्य बनाउन सक्छौं ।
योगका मुख्य चार प्रकार छन्- राज योग, कर्म योग, भक्ति योग र ज्ञान योग । यसैगरी योगका आठ अंग छन् । यसैले पतन्जलीले यसलाई अष्टांग योग भनेका हुन् । यसबारे योगसूत्रमा पतन्जलीले उल्लेख गरेका छन् । यस आठ अंगमा यम, नियम, आसन, प्राणायम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि छन् ।
रिभेन्ज पोर्न : यौन हिंसाको नयाँ रुप, महिलाहरु जोखिममा
प्रविधिको उपहारः निःसन्तानलाई आमाबाबु बनाउँदै ‘वात्सल्य’
डाइपरः बच्चाको स्वास्थ्य कि सुविधा ?
घिउः आयुर्वेदमा किन सर्वोत्तम मानिएको छ ?
निद्रा लाग्दैन ?( यसोगर्नुस) तपाईंको लागि काम लाग्नसक्छ
अर्को साताबाट ‘स्मार्ट लकडाउन’ सहित निषेधाज्ञा खुकुलो हुने
तारकेश्वरमा स्काउट दिक्षान्त समारोह संपन्न
थप ३ हजार ४ सय २१ जनामा संक्रमण पुष्टि, २५ संक्रमितको मृत्यु
नेप्से परिसूचक र कारोबार दुबै घट्यो
अन्डरग्राउन्ड मार्केटकाे व्यापार : भाडा सस्ताे, व्यापार काइदा
जहाँ बिहे अगाडि बेहुला बेहुलीलाई कुहिएका गोलभेँडा र अण्डाले हानिन्छ
लोकतन्त्रकै लागि खतरा बन्न सक्छ ‘आईटी आर्मी’ र ‘साइबर सेना’